6 akwụkwọ akụkọ mpụ na-abịa ịko gị | Bezzia
Maria onyekwere | 10/06/2021 12:00 | Akụkọ
Like na-enwe mmasị ịgụ akwụkwọ akụkọ mpụ? Ọ bụrụ na ụdị a bụ nke na-eme gị obi ụtọ karịa, rịba ama aha anyị na-eso gị taa. Akwụkwọ akụkọ mpụ isii a ka kụrụ ụlọ ahịa akwụkwọ ma ọ bụ na-abịa n'oge na-adịghị anya, jụọ maka ha! Dabere na ebe dị iche iche, ha na-ekwe nkwa mgbaghara, aghụghọ, esemokwu ...
1 Ndụ Nzuzo nke Úrsula Bas
2 N’etiti abalị
3 Ezigbo ezinụlọ
5 Igbu asatọ zuru oke
6 Nye onye ọ bụla nke ya
Ndụ Nzuzo nke Úrsula Bas
Onye edemede: Arantza Portabales
Isi ederede: Lumen
Úrsula Bas, onye ode akwukwo nke oma, na ebi ndu dika ihe ojoo na Santiago de Compostela. Otu Friday na February ọ na-ahapụ ụlọ ya ikwu okwu n'ọbá akwụkwọ ma ghara ịlaghachi. Di ya, Lois Castro, na-ekwugide na-efu ya mgbe awa iri abụọ na anọ gasịrị. Rsula, onye ka kpọchiri n'ime ụlọ okpuru uloỌ maara onye tọọrọ ya nke ọma - onye nwere mmasị na netwọkụ ya nke o kwere ka e kechie ya na-ebuteghị obere mgbochi - ọ makwaara na n'oge na-adịghị anya ọ ga-egbu ya.
Onye nyocha Santi Abad, enwetaghachiri ndị uwe ojii mgbe otu afọ na ọkara nke ezumike psychiatric, yana onye ibe ya Ana Barroso, onye a họpụtara ka ọ bụrụ osote onye nyocha, na-amalite nyocha na-enweghị isi site na enyemaka nke kọmishọna ọhụrụ ahụ, Álex Veiga. Nzọụkwụ gị niile na-eduga gị ọzọ ikpe a na-edozighị: nke Catalina Fiz, lara n'iyi na Pontevedra afọ atọ gara aga, na onye ogbu mmadụ nke yiri ka ọ na-ewere iwu n'aka ya.
Isi ederede: Mbipụta B
Otu abalị nwere ike iji akara akara aka nke ndị niile biri na ya? Ihe karịrị afọ iri abụọ agafeela kemgbe Diego Letamendia, onye na-agbada n’ike n’ike, mere n’obodo ya nke dị na Illumbe. Nke ahụ bụ abalị njedebe nke ndị otu ya na ndị otu ya, yana nke nke efu nke Lorea, enyi ya nwanyị. Ndị uwe ojii ahụ enwetụbeghị ike ịkọwapụta ihe mere nwata nwanyị ahụ, bụ onye a hụrụ ka ọ na-agba ọsọ site na ebe a na-eme egwu, dị ka a ga - asị na ọ na - agbapụ ihe ma ọ bụ mmadụ. Mgbe nke ahụ gasịrị, Diego malitere ọrụ ọganiihu nke ọma ma ghara ịlaghachi n'obodo.
Mgbe otu n'ime ndị otu ahụ nwụrụ na ọkụ ọzọ, Diego kpebiri ịlaghachi Illumbe. Ọtụtụ afọ agafeela na ijikọghachi ndị enyi ochie siri ike: ọ nweghị onye n’ime ha ka bụ onye ha bụ. Mgbe, enyo na-etolite na ọkụ abụghị ihe mberede. Ọ ga - ekwe omume na ihe niile metụtara ya na, ogologo oge, Diego nwere ike ịchọta ọhụụ ọhụụ banyere ihe mere Lorea?
Isi ederede: Salamander
Adam na Ulrika, bụ di na nwunye nkịtị, na nwa ha nwanyị dị afọ iri na asatọ Stella bi n'otu ebe dị mma na mpụga Lund. N'ile anya, ndu ya zuru oke ... rue otu ubochi nke a gha adighi ya na mgbọrọgwụ ya mgbe E jidere Stella maka igbu mmadụ n'ụzọ obi ọjọọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ iri na ise tọchara ya. Nna ya, onye ụkọchukwu ụka Sweden a na-akwanyere ùgwù, na nne ya, onye ọka iwu na-agbachitere ndị omempụ a ma ama, ga-echegharị ụkpụrụ omume ha ka ha na-agbachitere ya ma gbalịa ịghọta ihe kpatara ya ji bụrụ onye a na-enyo enyo na mpụ ahụ. Ruo ókè ha a willaa ka ha ga-echebe nwa ha nwanyị? Yoù maara n’ezie otú ọ dị? Ma na-echegbu onwe karị: ha maara ibe ha?
Isi ederede: Akwụkwọ Gatopardo
Kalmann Óðinnsson bụ onye mbụ biri na Raufarhöfn, obere obodo azu nke dị na Iceland. Ọ dị afọ iri atọ na anọ, na-eme isi ike, ọ bụ ezie na ndị agbata obi ya na-ele ya anya dị ka onye nzuzu obodo, ọ bụ onye ọka iwu nke obodo. Ihe niile na-achịkwa ya. Kalmann ji ụbọchị ya gagharịa na mbara ọzara gbara obodo ọzara ahụ, na-achụ nta nkịta ọhịa na obere egbe ya a na-apụghị ịkewa ekewa, na ịkụ azụ maka azụ azụ Greenland na oyi Arctic. Ma, mgbe ụfọdụ, onye na-agwa anyị okwu ga-ekwe ka eriri ndị ahụ gafere ma ọ bụrụ ihe egwu nye onwe ya yana, ikekwe, ndị ọzọ ...
Otu ụbọchị, Kalmann choputara ọdọ mmiri n'ime snow, dabara na enyo mfu nke Robert McKenzie, nwoke kasị baa ọgaranya na Raufarhöfn. Ọnọdụ dị iche iche ga-emeri Kalmann, mana ekele maka amamihe ya, ịdị ọcha nke obi ya na obi ike ya, ọ ga-egosi na, dịka nna nna ya gwara ya, IQ abụghị ihe niile na ndụ a. Ihe niile na-achịkwa…
Igbu asatọ zuru oke
Isi ederede: Siruela
Afọ iri na ise gara aga, ihe omimi akwụkwọ akụkọ ahụ bụ Malcolm Kershaw bipụtara na blọgụ nke ụlọ ahịa akwụkwọ ebe ọ rụrụ ọrụ n'oge ahụ ndepụta - nke na-enwetaghị nleta ọ bụla ma ọ bụ nkọwa ọ bụla - nke ọ chere na ha bụ mpụ kachasị edepụtara na akụkọ ihe mere eme. Ọ kpọrọ ya Ọnwụ asatọ zuru oke ma tinye ndị ochie site n'ọtụtụ aha ukwu nke ụdị ojii: Agatha Christie, James M. Cain, Patricia Highsmith ...
Ọ bụ ya mere Kershaw, onye di ya nwụrụ ugbu a na onye nwe ụlọ ahịa obere akwụkwọ na Boston, bu ụzọ nwude mgbe onye ọrụ FBI kụrụ aka n'ọnụ ụzọ ya na ụbọchị Febụwarị na-atụ ụjọ, na-achọ ozi na usoro ghoulish nke igbu ọchụ a na-edozighị nke ọ bụla yiri ibe ya. ndị ọ họọrọ na ndepụta ochie ahụ ...
Nye onye ọ bụla nke ya
Isi ederede: TusQuets
N'ehihie August na-agwụ ike onye na-ere ọgwụ nke obere obodo Sicilia na-enweta aha nke ha na-eyi ya egwu na ha ga-egbu ya ma nke ọ na-enyeghị ya mkpa. Ma, ụbọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, e gburu onye na-ere ọgwụ n'ugwu ahụ na onye ọzọ nwe obodo, bụ dọkịta Roscio. Ọ bụ ezie na asịrị ndị a na-akọ na-akpata mmebi a na-apụghị ịgbanwe agbanwe, ndị uwe ojii na carabinieri na-akụkwa ndị ìsì, naanị Laurana, onye nkuzi ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma zụlite ya, na-agbaso ụzọ nke nwere ike iduga onye ogbu mmadụ ahụ. Ọ chọpụtala na ejiri mkpụrụ okwu ewepụghị aha akwụkwọ akụkọ Katọlik na-achọghị mgbanwe, L'Osservatore Romano, mee aha ya, ebe ọ bụ na akara ngosi ya, Unicuique suum - "Maka nke ọ bụla, nke ya" - pụtara n'azụ mkpirisi ahụ. O na etinye onwe ya na ndu ndi agbata obi ya.
N’ime akwụkwọ ọgụgụ mpụ a, olee nke kacha adọrọ mmasị gị? Yougụla nke ọ bụla n'ime ndị edemede akwụkwọ akụkọ mpụ a mbụ? Soro anyị ụfọdụ akwụkwọ akụkọ mpụ ị na-anụ ụtọ ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Akụkọ » 6 mpụ akwụkwọ na-abịa nko gị